🥇 ▷ Sida loo arko sheekooyinka Instagram oo aan cidna ogeyn? ✅
Sida loo arko sheekooyinka Instagram oo aan cidna ogeyn?
Waxaa jira tiro qalab ah oo kuu oggolaanaya inaad aragto bartilmaameedyada isticmaalayaasha Instagram bilaa raad. Sidaad ogtahay, isticmaaleha la wadaagaya mid ayaa isla markaaba garanaya kii arkay, sida shaashadda hoos udhaca ah ayaa ku wargalineysa. Laakiin tani maaha inay ahaato jidkaas, iyo Halkan waxaan kuu sheegeynaa sida loo arko sheekooyinka Instagram oo aan cidna arag.
Inta badan aaladahaani waxay ku shaqeeyaan adoo adeegsanaya biraawsarkaaga, dhammaantoodna waxay u shaqeeyaan qaab isku mid ah. Isticmaalkiisu aad ayuu u fududahay, sida aad arki doontid.
Waa degel internet kuu saamaxaya inaad aragto mashiinka isticmaale kasta adigoon galin akoonkaaga. Waxa kaliya ee lagaa doonayaa waa inaad si toos ah uga raadiso isticmaaleha aad rabto inaad ka aragto sheekooyinka. Kuqor baaraha raadinta ee ku yaal bogga hore ee sheekooyinka. Waxaad arki doontaa sheekooyinka isticmaale iyo sidoo kale taariikh nololeedkiisa iyo sawirkiisa muuqaalkiisa.
Qalabkani wuxuu leeyahay faa’iidooyin aad ku soo dejisan karto mashiinnada haddii aad rabto. Waxa kale oo aad ku dhejin kartaa biraawsarkaaga kordhinta, labadaba Google Chrome iyo Mozilla Firefox.
Boggan waxaad sidoo kale ku qasbanaan doontaa inaad gasho magaca isticmaale si aad u isticmaasho sheekadooda. Marka lagu daro muujinta sawirka muuqaalka, aaladani waxtarka leh waxay leedahay faa iidada ay kuu muujineyso sheekooyinka la soo bandhigay.
Waxay sidoo kale ku ciyaartaa fiidiyowyada ciyaartooydeeda oo leh ikhtiyaar si ay u daawadaan shaashad buuxda oo ay ka daawadaan shaashadda shaashada. Doorashadani waxay kuu oggolaaneysaa inaad beddesho tabsarka biraawsarkaaga inta fiidiyowgu sii socdo.
Son Storiesig waxaad kala soo bixikartaa 24ka xijaab ee iftiinka.
Sheekooyinka Insta waa mid ka mid ah bogagga ugu dhameystiran ma ahan oo keliya daawashada iyo soo dejinta sheekooyinka si qarsoodi ah, laakiin sidoo kale daalacashada Instagram. Hagaag Marka lagu daro inay ku tusto mashiinnada waxay kuu oggolaan doontaa inaad daawato oo kala soo baxdo daabacaadaha isticmaaleha aad jeceshahay. Sawirada sawirada waxaa loo soo dejistaa si tayo leh, in kasta oo ay kuxirantahay sawir markii hore isticmaaley.
Cayaarahaaga fiidiyowgu wuxuu si otomaatig ah u tuuraa shaashad buuxda oo uu ku joojiyaa waxyaabaha aad u baahan tahay inaad guji sawirka.